अनलाइन मानसिक रीडिंग > भिडियो > Equinox: The Secrets of the Psychics
मेगन मार्च 23, 2017 भिडियोTagged adimmix मानसिक लेह, क्रिस्टल बच्चाहरु मानसिक पुस्तकहरु, नि: शुल्क अनलाइन मानसिक कुराकानी, नि: शुल्क मानसिक प्रश्न, प्रत्यक्ष मानसिक, प्रत्यक्ष मनोिक अनलाइन, प्रत्यक्ष मनोविज्ञान, प्रेम मानसिक पढाइ, मानसिक पढाइलाई प्रेम गर्नुहोस्, of, अनलाइन मनोिक, फोन मानसिक, मानसिक, मानसिक लेह, मानसिक पढाइ, मानसिक पढाइहरु, मनोविज्ञान, रहस्य, आध्यात्मिक मानसिक रीडिंग, आफ्नो मानसिक परीक्षण गर्नुहोस्, ..., क्रिस्टल बच्चाहरु मानसिक20 टिप्पणिहरु इक्विनोक्समा: द अफ द ओफ द साइटिक्स
जेम्स ब्रेट भन्छन्:
मार्च 23, 2017 10 मा: 34 हूँ
तथ्य यो हो कि मानसिक घटना फिक गरिएको छ, फेक गरिएको छ र यसको अधिकतर डेबिट गरिएको छ कि यो वास्तविक लागि अवस्थित छैन असम्भव छैन। यस संसारमा एक एजेन्डा छ कि उनीहरूको शक्तिको व्यक्तिलाई लुकाउन, उनीहरूले संस्थाहरूलाई हेर्नु भनेको उनीहरूलाई के सोच्नु र विश्वास गर्ने कुरा हो। यिनै देशका अल्पसंख्यक मानिसहरु पनि उनीहरुको अस्तित्वमा अहिल्यै पनि बुझ्न सकेननन, उनीहरुले यो संसारमा धनी कुलीनले नियन्त्रणमा लिएनन् र न त उनीहरु धेरै धेरै शोषण गरिरहेका थिए।
यो कहिले भयो?
रबर्ट केरी भन्छन्:
मलाई जडीबुटीको बारेमा जान्नको लागि एडी द वुड्सम्यान आवश्यक छैन मसँग एउटा किताब भनिएको चीज छ, यो धेरै भरपर्दो छ र वैज्ञानिक अनुसन्धान गरिएको छ, एडीमा भर पर्नु भन्दा धेरै सुरक्षित!
कृपया मैले एउटा विषुव एपिसोड हेर्नु आवश्यक छ। सीजन १ ×।। चेतनाको बन्दी।
त्यहाँ एक मात्र मानसिक सत्य हो! क्लिलिटन बिप्टिस्टे।
आदम मंगलर भन्छन्:
LOL यस लेखलाई लायक हेर्ने: बीबीसी साइटमा आज "भूतिया उपस्थिति प्रयोगशालामा सिर्जना गरिएको"।
Vicente नैतिकता भन्छन्:
जो लोग मनोविज्ञान मा विश्वास गर्छन कुल नैतिकता हो, आएर मस्तिष्क प्राप्त गरें।
टोनी रेगन भन्छन्:
मानसिक एक माध्यम बीच केहि फरक छ केहि मान्छे यी हेर्नु पर्छ ..
माइकल एवरेस्ट भन्छन्:
महान वृत्तचित्र, म व्यक्तिगत रूपमा एक शंकास्पद हुँ,
अझै मैले तारा छान्नुभयो ……।
कार्ल लार्टे भन्छन्:
म तर्कसंगत दृष्टिकोण को सम्मान गर्दछु। यो कुनै तरिकामा धेरै राम्रो छ।
म ती व्यक्तिहरूमध्ये एक हुँ जसले यी चीजहरू प्रायः अनुभव गर्दछन्, म विश्वास गर्न सक्दिन अरूले देख्न सक्दैनन्। म अरूलाई शंकास्पद भएको आरोप लगाउँदिन।
यो बहस गर्न लायक पनि छैन किनकि विज्ञानको पाँच इन्द्रियमा यसको मानकहरू छन्।
तर यदि तपाईं वास्तवमै यी चीजहरूमा प्रमाण चाहनुहुन्छ भने, तपाईं यसका लागि माग्ने सम्पूर्ण जीवनकाल खर्च गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईं जे हेर्नुहुन्छ त्यसमा संशयवादी हुन सक्नुहुनेछ।
कुनै एक जाँदै छ यो तपाइँलाई प्रमाणित। सबै तपाईंले प्राप्त गर्नुहुने सबै कथाहरू, भिडियोहरू हुन्, यदि तपाईं प्रमाणको लागि व्याकुल हुनुहुन्छ भने, त्यसो भए तपाईं आफैले यो प्रमाणित गर्नुपर्दछ। कसैले पनि यी चीजहरू तपाईका लागि अनुभव गर्न सक्दैनन्, आफैंमा यी अनुभव गर्नुहोस्।
जीव, झूठ, झूट
Javier Gomez भन्छन्:
24 अगस्ट 1997
fred चालीस भन्छन्:
सबै मनोचिकित्सकहरू धोखाधारीहरू हुन्।
मनोविज्ञानमा उत्कृष्ट वृत्तचित्र ... के तपाइँ विश्वास गर्नुहुन्छ?
टाइगरक्वाक्स 1000 भन्छन्:
यो अपलोड गर्नको लागि धन्यवाद, थेसिस वृत्तचित्रहरू पृथ्वीमा हरेक विद्यालयमा पाठ्यक्रमको भाग हुनुपर्छ!
बेन थेजार्सर भन्छन्:
बाडेको मा धन्यवाद। यी मुनिहरू एक भन्दा बढी सामान्य सोच्न सक्छन्। स्किप्टिक आंदोलनले तपाइँलाई के अनुभव गरेको व्याख्या गर्न सक्छ, कुनै पनि कुरा यो हो वा यसलाई स्वीकार गर्नको लागि कति राम्रा कारणहरू छन्, यो वास्तविक रूपमा, यदि तपाईं चाहानुहुन्छ।
पल किनेली भन्छन्:
म एक स्केप्टिक हुँ तर त्यसपछि मलाई धेरै अनौंठो कुरा भयो र अरु दुई घटनाहरुमा जुन म हाम्रो विचारहरुसँग सम्बन्धित छु भनेर व्याख्या गर्न सक्दिन। अन्य म7वर्षको थिएँ र केवल दर्शन पाएँ र उहाँसँग कुरा गरें। उनले भने कि कसैले पनि मलाई विश्वास गर्दैन। त्यसोभए किन उनले यस्तो कुरा फैलाए कि मैले आफैंलाई समस्या परेको छु के मैले ती सबै कल्पना गरे? हुनसक्छ
उरी गेलरको बारेमा कुरा यो हो कि ऊ केवल एक धेरै राम्रो जादुगर छैन। एक राम्रो कन्ज्युरेरले अनुकूल बनाउनु पर्छ - नयाँ र अझ राम्रो भ्रम सिर्जना गर्नुहोस्। कपरफिल्डको उडान, ल्याटिमरको लेजरहरू।
जेलरसँग केवल एक मुट्ठीभर तरिकाहरू छन् र उनको कार्य जीवनकालमा परिवर्तन भएको छैन।
त्यसोभए, ऊ कन्मेनमा रूपान्तरण गर्दछ। यदि उसको धितो चालहरू वास्तविक छन् भने, यो ठीक छ कि उनको कार्य एक मिलियन वर्ष पुरानो हो।
तर तिनीहरू वास्तविक छैनन्। थोरै पनि छैन।
मलाई थाहा थिएन कि जेलरले लगानी फर्मलाई ठग्यो।
अनि उसले जादू चट्टानहरू बेच्छ।
कुन ac ** टी।
किन मलाई लाग्छ कि यो एकतर्फी छ?… स्पष्ट छैन? के तपाई वास्तवमा निष्पक्ष हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ? के तपाईले मुद्दाका सबै पक्षलाई सम्बोधन गरेको जस्तो लाग्छ? किन मलाई लाग्छ कि यो अव्यावसायिक हो? किनभने प्रचार प्रसार गर्नु जुन विषयलाई विकृत दृष्टिकोण दिन डिजाइन गरिएको हो खराब पत्रकारिता हो। मलाई किन यो बकवास लाग्छ? ... खैर, माथि हेर्नुहोस्!
जोश 111485 भन्छन्:
किन तपाईं यो "अव्यावसायिक एकतर्फी बकवास" लाग्नुहुन्छ?